Ingabe iCopernicus noma i-Aristotle iqhuba ibhizinisi lakho? | Martech Zone
NgoLwesithathu, uDisemba 30, 2009 NgoMgqibelo, Novemba 28, 2015 Douglas Karr
Kunamabhizinisi amaningana engisebenza nawo… futhi ngicabanga ukuthi lawo engiwajabulela kakhulu yiwo abona ukuthi awabalulekile njengamakhasimende awo. Abanye abanye abavumi ngisho nokuthi kukhona ikhasimende.
UCopernicus ukhonjwe njengoyise wesayensi yezinkanyezi yanamuhla selokhu aphikisana ne-heliocentrism nge-geocentrism. Ngamanye amazwi, ilanga laliyisikhungo sohlelo lwethu lwamaplanethi, hhayi uMhlaba. Kwakuhlambalaza futhi wayephikisana nesiko lonke lezazi ezazihlangene nenkolo ngaleso sikhathi. Kodwa wayeqinisile.
Uma ufuna ukuxazulula izimfihlakalo zendawo yonke yebhizinisi lakho, ungahle uthande ukuzibuza imibuzo ethile mayelana nokuthi ibhizinisi lakho liqhutshwa kanjani. Ukungaboni ikhasimende lakho njengesikhungo sebhizinisi lakho futhi okubaluleke kakhulu kunanoma ngubani kulo kuholela ekubuyiselweni kwemali yabasebenzi, inzuzo yamakhasimende, futhi ekugcineni kungaholela ekuweni kwebhizinisi lakho.
Imiphumela Sinjani? Enza kanjani amakhasimende ethu?
Ukusetshenziswa Bayisebenzisa kabi. Singakwenza kanjani lokho?
Cost Sidinga ukukhokhisa okuningi. Yini ukubaluleka kwemikhiqizo yethu noma izinsizakalo kumakhasimende ethu?
Ukugcinwa Usishiyelani? Ngabe senza konke okudingekayo ukukugcina?
Ozakwethu Yini abasenzele yona? Yini esingayenza ukuqinisekisa impumelelo yabo?
Abasebenzi Babengeyona indawo enhle. Abasebenzi bethu basenza siphumelele.
isabelomali Thola ukuvunywa. Uzobekwa icala.
Marketing Ukuhola okuningi. Thola amathuba esingasiza kuwo nakanjani.
Isiqu Sokuhola Ingabe inqubo yabo yekhadi lesikweletu? Ngabe sizobenza baphumelele?
Ukuzivumelanisa Nezimo Kwabasebenzi Ithini incwadi yesandla? Singakugqugquzela futhi sikuthuthukise kanjani ukukhiqiza?
Isu Akusebenzi… enye i-Re-org! Abaholi bethu bethula uhlelo lwabo lweminyaka emi-5.
Izici Basikopisha! Sisebenza ngokulandelayo?
Ezimayelana Nomphakathi Thola ukunakwa. Thola uthando.
Ukuzibandakanya Komphakathi I-IT ivimbe konke! Khuthaza abasebenzi ukuthi bahlanganyele!
Uluhlobo luni lwenkampani? Kulezi zinsuku zokuxhumana, kulula ukusho. Uma umbono wakho wokuxhumana nabantu ufaka umyalezo wakho kumakhasimende akho, mhlawumbe uqhutshwa ngu-Aristotle. Uma umlayezo wakho umemezela impumelelo yamakhasimende akho, uphethwe nguCopernicus. Kuthathe umhlaba iminyaka eyi-1,800+ ukukuthola… ngethemba ukuthi akuthathi ibhizinisi lakho isikhathi eside.
Dec 30, 2009 ku-7: 29 AM
Ukuqhathanisa okuhlakaniphile, uDoug. Eqhubeka nokuqhathanisa, uHenry Ford waqala njengeCopernicus futhi waba ngu-Aristotle isikhashana, futhi ekugcineni waphoqeleka ukuba abuyele eqinisweni lomhlaba wonke webhizinisi laseCopernican. Ngokungafani nekhulu le-14, labo abalandela indlela engenzi amakhasimende ebhizinisini abayifaki itiyela nezimpaphe ngezinkolelo zabo. Bayabhanga noma bamangalelwe.